‘दर्शक भगवान हुन्’ : डा…खाते निर्मात्री केसी « Ramailo छ
प्रकाशित मिति : Jul 20, 2017
सडक बालबालिको कथामा निर्माण भएको फिल्म ‘डा…खाते’ यही शुक्रबार अर्थात् साउन ६ गतेदेखि अल नेपाल प्रदर्शनमा आउँदैछ । निर्माता रोशनी केसीलाई फिल्मको प्रचार प्रसार देखि हल व्यवस्थापनमा भ्याइनभ्याइ छ । यिनै व्यस्त निर्मात्रीसँग हामीले ६ प्रश्न राखेका छौं :
१.डाक्टर खाते… कस्तो खाले फिल्म हो ?
यो एउटा सामाजिक विषय वस्तुमा बनेको फिल्म हो । हाम्रो घर, परिवार र समाजमा घटिरहेको घटनामा बनेको फिल्म हो ।
२.यो आर्ट फिल्म हो कि फिचर फिल्म हो ?
आर्ट या फिचर भन्दा पनि यो वास्तविक कथा वस्तुमा बनेको फिल्म हो । समाजमा घटि रहेका घटनालाई अध्ययन गरेर बनाइएको फिल्म हो । अब हलमा चलाउने भएपछि पक्कै पनि यो फिचर फिल्म नै हो ।
३.यही विषयमा फिल्म बनाउने भनेर कसरी निर्णय लिनु भयो ?
म जहिल्यै पनि समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दछु । अरुको फिल्म खेल्दा अरुको चाहानाको मात्रै फिल्म खेल्न पाउँछु, आफ्नो चाहना अनुरुप पाउँदिनं । यसरी हेर्दै जाँदा सडक बालबालिकाको विषयमा कमै फिल्महरु बनेको पाएँ । यसैले पनि हामी यस्तो विषयमा फिल्म बनाउँन पुग्यौं ।
४.यो फिल्ममा तपाईंको भूमिका चाहिं कस्तो छ ?
अरुको फिल्ममा नायिका भएर खेलिरहेको यो फिल्ममा चाहिं म कलाकार भएर खेलिरहेको छु । मेरो रोल भन्नु पर्दा केमियो कलाकारको छ ।
५.सार्वजनिक प्रदर्शनबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउने आशा राख्नु भएको छ ?
दर्शक भनेको हाम्रो भगवान हुन् । भगवानले पक्कै पनि हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने आश छ । उहाँहरुले पक्कै पनि फिल्म हेर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
६.अब रिलिज आइसक्यो, निर्देशक पनि हुनुहुन्न । कसरी कामको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ त ?
हो त रिलिज आइसक्यो । कोही पनि छैन । म एक्लै दौडि रहनु परेको छ । कहिले त ठुलो स्वरले रुन मन लाग्छ । तर रुन चाहिं सकिरहेका छैन । जे भएपनि फिल्मलाई राम्रो बनाउन लागि परिरहेका छु ।